केवल ज्वरो मात्र होइन, यी ३ ल’क्षण देखियो भने पनि कोरोनाको हुन सक्छ, हेर्नुहोस् – Jagaran Nepal
पाचन प्रणालीलाई अ’सर गर्ने गरी कोरोना भाइरस संक्रमणले बि’रामीको गन्धको श’क्ति र मुखको स्वाद बि’गार्दैछ । यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बि’रामीहरुमा भइरहेको छ । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा ‘सास फे’र्ने क्षमतालाई असर गर्छ। कोरोना बि’रामी बढ्दै छ, यसको’ अन्य प्रभावहरु पनि छन्।
भारतमा राज्य दून मेडिकल कलेज अस्पतालको श्वासन रोग विभागका प्रमुख तथा कोरोनाका नोडल अफिसर डा. अनुराग अग्रवालले भने कि धेरैजसो बि’रामीको सामान्य लक्षण हुँदैन। उनले भने कि कोरोनाबाट पी’डित बि’रामीहरुमा पनि सु’घ्ने श’क्ति र मुखको स्वाद हराउने, पखाला ला’ग्ने भो’क नलगाएको गु’नासो छ। यद्यपि यो समस्या १५ दिन सम्म रहन सक्छ ।डा. अनुरागले’ भने कि यदि ग’म्भीर अवस्थामा रहेका बि’रामीको अवस्था पहिले नै बि’रामीले ग्रस्त छ र वृद्ध बि’रामी बढ्दै जान्छ भने नि’मोनिया, फोक्सोको बढ्दो ख’तरा, साथै फोक्सो, मुटु वा म’स्तिष्कमा थ’कावट हुन्छ। यद्यपि धेरै त्यस्ता घ’टनाहरू यहाँ रिपोर्ट गरिएको छ।
प’चाउने खाना र धेरै पानी पिउने-डा. अनुरागले भने कि यदि चिसो, खो’की, चिसो, ज्वरो, पखाला वा पेट दु’खाइ जस्ता समस्या छ भने डाक्टरको परामर्श बिना कुनै औ’षधि नलिनुहोस । पचा’उन योग्य र पौष्टिक खाना, दाल, ताजा तरकारीहरू राम्रो पकाए पछि मात्र खानुहोस ।
शरीर’मा भाइरल ज्वरोले पानी कम गर्दछ ।यस्तो अवस्थामा सामान्य व्यक्तिले पनि दैनिक क’म्तिमा १० गिलास पानी पिउनु पर्छ। भिटामिन सीको साथ ताजा फलफूलहरू पनि खानुहोस्। ताकि शरीरको प्रतिरक्षा म’जबूत रहोस । स्रोत : अमर उज्वाला
थप पढ्नुहोस –आजै छोड्नुहोस रो’ग प्र’तिरोधात्मक क्षमता घ’टाउने १० खानेकुरा-विश्व स्वास्थ्य संगठ’न लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले रो’गसंग ल’ड्ने क्षमता अर्थात इ’म्युनिटि कमजोर भएका मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने जो’खिम उच्च हुने जनाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार पनि यस महामारीका कारण मृ’त्यु भएका ब्यक्तिमा रोग प्र’तिरोधा’त्मक शक्ति कमजोर भएको पृष्टि भएको छ ।त्यसैले हरेक ब्यक्तिले यस महामा’रीबाट ब’च्न आफ्नु इ’म्युनिटि शक्ति बढाउनु आव’श्यक हुन्छ । तसर्थ तसर्थ इ’म्युनिटि पा’वर कम गर्ने खानाबाट बच्नु अत्यावश्यक छ । के के हुन् मानिसको रो’ग प्र’तिरोधात्मक श’क्ति घ’टाउने खानाहरु :
–सोडा-मानिसको इ’म्युनिटि पावर कमजोर बनाउने एक खाद्य पर्दाथ हो, सोडा । सोडामा सु’गरक मात्रा अत्यधिक हुने भएका:ले यसले इ’न्सुलिनमा सु’गर लेभल बढाउने गर्दछ जसले रो’ग इ’म्युनिटि पा’वक क’मजोर बनाउँछ ।
–रि’फाइन तेल-यदि खाना बनाउन बा’र बार एकै प्रकारको तेल वा रि’फाइन तेलको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको स्वास्थ्यका लागी हानि’कारक हुनसक्छ । यस प्रकारको तेलले मानिसको इ’म्यूनिटी पावर क’मजोर बनाउँछ ।–फास्ट फूड-अधिकांश शह’रमा बस्ने मानिसहरु बजारको फा’स्टफूड खाने गर्दछन् । तर फास्टफुडमा सुगरको प्रयोग हुने तथा फाइबरको मात्रा कम हुने भएकाले यसको से’वन शरीरका लागी हानि कारक हुन्छ । यसले पनि मानिसको इ’म्युनिटि श’क्ति घ’टाउँछ ।
–क्या’फिन-अहिलेका पुस्ता तथा बिदेश बसेर आउने मानि’सहरुमा कफी पिउने शौख उच्च रहने गरेको छ । तर कफी पिउने मानिसमा यसमा पाइने क्याफि’नका कारण इ’म्युनिटि पावर कम हुने गर्दछ । तसर्थ कफी पीउने बानि तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
-क्या’न सुप र फलफुल जुस-आजकल बजारमा स्टि’ल क्या’न बन्द फलफुल, सुप तथा जुस पाउने गर्दछ । तर यस प्रकारको क्यान बन्द खानाको सेवनले शरीरको पोषक तत्व नास पारी मानिसको इ’म्युनिटि पावर क’मजोर बनाउने गर्दछ ।
–सि’लबन्द अचार-बजारमा प्रसस्त मात्रामा पाइने तथा निकै स्वादिलो हुने सी’लबन्द अचार पनि मानिसको इ’म्युनिटि पा’वर क’मजोर पार्ने एक का’रक मानिन्छ । यस प्रकारका अचारमा सो’डियमको मात्रा उच्च हुने भएकाले यसले डि’हाइड्रेसन र कि’ड्नीको स’मस्या नि’म्त्याउने गर्दछ ।
–प्या’केजिङ मा’सु-फ्रेस हाउसमा कु’र्न अल्छि मान्ने तथा हतारमा हुनेहरुले बजारमा पाइने प्या’केजीङ मासुको प्रयोग गर्दछन् । तर यस प्रकारको ब’न्द प्याकेटमा आउने मा’सु पनि मानिसको इ’म्युनिटि पावर कम’जोर बनाउने कारक मानिन्छ ।–बासी खाना-हुनत बासी खाना कुनै बेला पनि उपयुक्त हुदैन । अझ कोरोनाको संक्रमणको त्रा’स रहेको बेला त झन बासी खानाको से’वन हा’निकारक हुन्छ । बासी खा’नाले इ’म्युनिटि पावर कम’जोर बनाउने भएकाले यसको सेवन नगर्नु सबैभन्दा बेस हुन्छ ।
–पानी-खाना बनाउने’ तथा पिउने पानी’का बिषयमा पनि स’चेत हुन आवश्यक छ । किनकी हामीले प्रयोग गर्ने पानी संग्लो वा सफा देखिदैमा यो सफा नहुन सक्छ । त्यसैले पानीका कार’णले पनि मानिसको इ’म्युनिटि पा’वर कमजोर बन्न सक्छ ।१०. अन्य उपाय-समयमा खानपान नगर्ने, शा’रीरीक ब्यायाम नगर्ने, हिडडुल गर्न नचाहाने मानिसमा पनि इ’म्युनिटि पावर कमजोर हुनसक्छ । अनावश्यक त’नाव लिने, पर्याप्त नि’न्द्रा नपुग्ने तथा धु’म्रपान र म’द्यपान गर्नुहरुमा पनि इ’म्युनिटि पावर कमजोर हुन्छ । त्यसैले यस बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।